Gbanwee ụbọchị na oge nke ọtụtụ onyonyo sitere na Google Photos Web | Gam akporosis
Nwere ike ịtọọ ụbọchị na oge nke ọtụtụ foto n'otu oge site na webụsaịtị Google
Manuel Ramirez | | Noticias
Ọ bụrụ na enwere ihe anyị nwere ike iji kọmpụta mee n'oge ụfọdụ ọ bụ maka ọsọ ọ na-eche ijikwa anyị na nkịtị anụ ahụ na òké. Nke a na-enye anyị ohere idezi akwụkwọ ọsịsọ ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ejighị anyị ụzọ mkpirisi igodo. Ọ bụrụ na inwere uru ahụ, ọ na-esiri ike ijikọta ọsọ nke arụpụta nwere ike ịrụ na kọmputa.
Iji nweta uru a, ọ bụ ugbu a mgbe foto Google emelitere na nsụgharị weebụ ya mere ị nwere ike idezi ụbọchị na oge nke onyonyo site na ọtụtụ onyonyo n’otu oge. Ruo taa ọ na-ekwe ka nhọrọ nke ịme ihe a na otu foto. Naanị ihe nhọrọ a dị naanị site na ntanetị weebụ na foto.google.com.
Naanị naanị ị ga-ahọrọ foto niile ị chọrọ na keyboard ụzọ mkpirisi uppercase + òké pịa ma ọ bụ pịa akara ngosi "dị mma" na foto ọ bụla. Ozugbo emere nke a, ị ga-aga bọtịnụ nwere ntụpọ atọ kwụ ọtọ nọ na akụkụ aka nri elu wee họrọ "Dezie ụbọchị na oge". Ga-enwe nhọrọ abụọ: Gbanwee ụbọchị na oge na Tọọ ụbọchị na oge.
Nke mbụ na-enye anyị ohere ịtọ ụbọchị mmalite nke foto gị niile ga-agbanwe ma gosipụta nhụchalụ nke ebe enwere ike itinye foto ndị ahụ metụtara foto ndị ọzọ emere na ụbọchị ahụ. Nhọrọ nke abụọ na-enye gị ohere ekenye ụbọchị na oge pụrụ iche maka onyonyo niile na ị họrọla na mbụ.
Na nke a ngwa dezie mode Nwere ike gbanwee ụbọchị nke foto ndị ahụ gosipụtara na afọ ole na ole na-ekwekọghị na ụbọchị ewere ha. Obere ihe na-atọ ụtọ, nke na-abịa n'ọnwa nke ọzọ, iji hazie nchịkọta foto gị nke sitere na Google Photos.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Nwere ike ịtọọ ụbọchị na oge nke ọtụtụ foto n'otu oge site na webụsaịtị Google
Nkwupụta, hapụ nke gị
eme Afọ 1
Ọ bụrụ na ibudata ihe oyiyi mgbe ị dezigharịrị ya na foto Google, mgbanwe ahụ apụtaghị na faịlụ ahụ.
Ngwa ngwa ngwa gam akporo ọzọ bụ ihe ijuanya nke Google I / O nke nwere ike ịgbanwe ihe niile
Xiaomi mara ọkwa Mi Drone na nsụgharị 1080p na 4K na ndekọ vidiyo